Indented Cylinder Factory - China Indented Cylinder Manufacturers uye Suppliers
5XWM indented silinda kureba giredhi kureba yekuronga muchina
Iyo 5XWM Series Indented Cylinder (Length Grader) yakanziwo Grain Kusarudza Grader kana Yakaputsika Grain Separator. Inomaka zviyo & mhodzi zvichienderana nehurefu, inogona kuparadzanisa tsvina yakareba kana ipfupi kubva kune granular zvinhu.
Masilinda akaiswa anoshandiswa pakureba kwezvinhu zvese zvegranular segorosi, oat, buckwheat, mhodzi yeuswa, matanda kubva kumbeu yesunflower kana shuga beet, mapurasitiki zvidimbu nezvimwewo, pamwe nekubvisa zvisingadiwe zvipfupi kana kureba zvakasanganiswa.
5XWY indented silinda kureba giredhi yegorosi bhari yemusango oats paddy
Iyo 5XWY Series Indented Cylinder (Kureba Grader) yakanziwo Grain Kusarudza Grader kana Yakaputsika Grain Separator. Inomaka zviyo & mhodzi zvichienderana nehurefu, inogona kuparadzanisa tsvina yakareba kana ipfupi kubva kune granular zvinhu.
Masilinda akaiswa anoshandiswa kurebesa kwese kwese gorosi, mupunga, oat, buckwheat, mhodzi yeuswa, matanda kubva mhodzi yesunflower kana shuga beet, mapurasitiki zvidimbu nezvimwewo, pamwe nekubvisa zvisingadiwe mapfupi kana marefu akasanganiswa.